Absolutely ridiculous!!Komii biyya keessaa natti ergame cuunfee akka armaan gadiitti dhiheesseera. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAbsolutely ridiculous!!Komii biyya keessaa natti ergame cuunfee akka armaan gadiitti dhiheesseera.
Absolutely ridiculous! Komii biyya keessaa natti ergame cuunfee akka armaan gadiitti dhiheesseera.
Muummichi Ministeeraa Dr. Abiyyi har’a ‘artiistota biyyattii’ waliin leenjii marii makate godhee ture. Sagantaa kana keessatti artistoota Oromoo tokko tokko irraa komiin dhagahamaa jira. Nuti maaliif afeeramuu dhabne jechaa jiru. Jijjiirama amma dhufe kana keessatti qoodni Qeerroo hiriyaa hin qabu. Qabsoo Qeerroo kana ammoo ogummaa aartiitiin humneessee kan tumsa jabeesseef artiistota Oromooti. Qoodni Qeerroo fi artistota Oromoo injifannoo amma arganne kanaaf furtuu akka tahe Dr. Abiyyi caalaa kan beeku hin jiru. Dr. Abiyyi osoo gara aangoo kana hin dhufin dura artistoota Oromoo waamee sagantaa akka har’aa kana qopheessee waliin maryachaa akka ture nan yaadadha. Tarii marii sana fakkaatutu warra Amaariffaaf har’a qophaahee laata? Yoo akkas taheef iftoominaan artistoota Oromoo quba qabaachisuu barbaachisa. Waanuma isin waliin dursinee goone sana amma jara kana waliin godhaa jirra jedhamuu qabu.
Tarii kun sagantaa akka guutuu biyyaatti qophaaheedha yoo taheef ammoo sababni artistoonni Oromoo kana keessaa alatti hafaniif jira natti hin fakkaatu. Hundumaafuu mee warri dhimmichatti dhiheenya qabdan odeessa qulqulluu osoo nuu qooddanii galata qabdu. “Ni ida’amna” waan jedhu kana nus deeggarree tumsa duulaa godhaafii jirra. Ida’amuun waan qaban qabatanii walitti dabalamuu jechuudha malee tokko isa kaanirratti olaantummaa garsiifachuu miti jennee duula Muummichaatiif tumsa godhaafii jirra. Mallattoon Oromoo mufachiisu akkasii kun ammuma qacaleetti sirreeffamaa deemuu qaba. Ida’amuu jechuun kaan gammachiisuuf jecha kan ofii lagachuu yookiin duuba qabuu tahuu hin qabu.
Kana booda diasporaa baay’eetu biyyatti galuuf shaanxaa xaxataa jira. Diasporaan kun ammoo laalcha finxaalummaa siyaasaa walirraa fagaate qaba. Komiin akkasii kun akka qaawwa argachaa hin deemne yoo yeroodhaan duuchuu baanne diasporaan gaafa dhufe balaa guddaa dhalchuu danda’a. Kanaafuu ni ida’mna eega tahee sirriitti wal qixxummaan keenya eegamaa ida’amuutu nurra jira. Olola walirratti oofuuf osoo hin taane rakkoo akkasii tuffatanii bira dabruun boru rakkoo toyannoon ala bahu nutti fiduu mala sodaa jedhuufi.
“ገደገደው” በሚለው “ዝነኛ” ዜማዋ የምትታወቀው ትግስት ወዬሶ ለምን ሳትደመር ቀረች ዛሬ?? መደመር ወቅታዊ ፎርሙላችን አይደለም ወይ? ወይስ ለኔ ሳትታየኝ ቀርታ ነው እዚ ፎቶ ውስጥ? @GadissaHoma pic.twitter.com/eag2IXCJrC
— Girma Gutema℠ (@Abbaacabsa) June 27, 2018
Qabsoon Oromoo sadarkaa kanarra gayuunsaa nugammachiisa garuu Artistoonni Oromoo akka waan nama tokko malee hin jirreetti kan Ukkaamsuu yaalan warra waldaa Artistootaa bakka buune ofiin jettu tokko tokkootu kunoo ofuma qofa lakkaayee sagalee Artistoota Oromoo xiqqeessuuf akkana hojjata ilaalaa kophaasaa Orma waliin hirmaate.Nuti Ummanni hojii keenyaan nubeeka rakkoo berkamtii hin qabnu homayyuu mootummaarraa barbaannees miti garuu ifaajee artistoota keenyarra haguuguudhaaf waan godhame kanatu waan ta’uu hin qabne .Nuyi kana dhabne jennee wanti nurraa hafu hin jiru. Artistoonni Oromoo kaleessas Ummatasaa qaba har’as Abdiin keenna Ummatuma, fuuldurasfis ejjannoon keenya Kan Ummata keenyaati , yoomuu karaan keenya Ummata keenya waliini! “Walumaa galattuu waldaan Artistootaa Amma juru kuni bakka nuhin
Hacalu was forced to leave the hall on today’s meeting of artists with PM Dr. Abiy. Who brought this man to the PM position? Is it OPDO or the so called EPRDF? Oromo struggle is not to install another version of TPLF
Hacaaluu Hundessaa – Cabsaa -**NEW** Oromo Music 2017
If this populist PM is really serious about his reform rhetoric, he should sit down and work on ensuring the security of individuals to live in peace in different parts of the country first. He should seriously work on the security sector — second to none! He should bring to justice all the culprit and makers (old guard TPLFites) of the havoc and violence now underway, in different parts of the country, who all reside under his own armpit. We are tired of chanting the slogan “down down wayyanee” while in fact he says, “I’m in control”.
Innocent mothers and children, and other ethnic minorities are becoming victims of this violence while he gives a ridiculous, futile and nonsensical “training” for the gullible habesha “artists” in the palace hall. Should an artist, if s/he is really an artist, take a “training” given by a politician, in the first place?
Kan qabsaawu ka biraa. Kan waamamee injifannoo Waliin habbuuqatan ka biraati.
Wanti akkanaa Dafee sirraawuu baannaan balaa hamaa fida. Artiistonni Oromoo injifannoo harra argame kanaaf, itti hidhamanii jiru , itti Ajjeefamanii jiru, qaama itti hirratanii jiru, biyyarraa ari’amanii jiru, maatii gatanii bosonatti galanii jiru.
Maarree kabajaan kun isaaniin hin maluu harra?
Warning dafee sirraawuu qaba kuni.
Artistonni Oromoo Dhiifama gaafatamuu qabu.
Dubbiin artiistota Oromoo kun yaaddoo biraa tokko na yaadachiisa. Akkaataa afeerraa artiistotaa irraa qabee wanni mul’atu qaamni tahe tokko toyannaa homaatuu malee murtee dabarsaa jiraachuu isaa ti. Fakkeenyaaf Artiist Aster Bedhaanee erga galma walgahii geessee booda akka achirraa gadhiiftee deemtu dirqisiifamuu isii ibsiteetti. Artiistiin tun jagnummaadhaan Wayyaanota dura dhaabattee mirga ummataaf falmaa turuu isiitiin beekamti. Qaamni isii akkasii kana achirraa aryatu har‘allee Dr. Abiyy jala gugatee waltajjii akkasii geggeessaa jiraachuun raajii dha. Waamichi sun qaama tahe tokko afaan bu’e. Qaama jijjiirama dhufaa jiru butee dantaa ofii kan warra kaanii irratti fe’uuf bololaa jiruun butame. Kan amma agarre kun fakkeenya tokko. Rakkoon akkasii asirratti dhaabbachuuf hin deemu. Walumaa galatti hawwii fi tarkaanfii Muummichaan fudhatamaa jiran gara dantaa ofiitti harkisuun mul’ataa jira. Ummanni Oromoo fi MNO haala kana itti dhiheenyatti hordofaa deemuu barbaachisa. MM qofatti dhiifnee komachuun sirrii hin tahu.
Caasaan Oromiyaa keessaa yeroo dogoggorri dantaa Oromoo tuqu sadarkaa Federaalaatti hojjetamu callisee dabruun hin tahu. MM tumsuu jechuunis akkasitti natti fakkaata. Hojiin sadarkaa Mootumma Federaalaatti hojjetamu kamuu dantaa ummata Oromoo eegee, miidhama sabni kun baroota dheeraaf keessatti kufee ture kan hin fayyifne yoo tahe balaa qaba. Abbaan warraaqsa kanaa Oromoo dha. Garuu Oromoon olaantummaa ofii warra kaanirratti fe’uuf hin warraaqne. Warraaqsa Oromoon dhiiga isaa itti gabbaree asiin gahetti fayyadamee warrri Oromoo irratti deebi’ee goobuu barbaadu gorfamuu qaba. Ibiddaan hin taphatinaa naa jedhaanii.
Sadarkaa federaalaattis tahee sadarkaa MNOtti hanqinoota akkasii kana qacaleetti furaa deemuun haa aadeffatamu. Tahuu baannaan qaawwa booda cufachuun nutti ulfaatu baayee ofitti banaa deemuu taha. Warra dunuunfatee isin abaaruufis karaa banuu dha. Jijjiirama amma jiru kana kan hundaaf sifaahu gochuuf waliin hojjechuu keessatti hanqinoota kana ganamaan walitti himanii osoo toyannoon ala hin bahin dura furmaata waliin itti barbaaduunis jajjabeeffamuu qaba. Olola jibbamsaa fi mata jabinaa irraa addatti hubatamee faayidaa irra ooluutu gaarii dha.